यी ५ राशि भएका मानिसहरु हुन्छन् असाध्यै धोकेवाज ! | Rochak
April 18, 2021 NepstokLeaveaComment on यी ५ राशि भएका मानिसहरु हुन्छन् असाध्यै धोकेवाज !
प्रेम वास्तवमा पारस्परिक खुसी र स्नेहको एक विस्तृत रुप हो । अन्यप्रति गरिने स्नेह नै प्रेम हो । प्रेम सागरजस्तो हुन्छ । अ यसको गहिराइ नाप्न सकिन्न, अझ होइन प्रेम आकाशजस्तो हुन्छ, जसको विशाल फैलावट नाप्न सकिँदैन ।
प्रेम आत्माको स्वभाव हो । प्रेम हरकोहीको नैसर्गिक अधिकार हो र सबैले बुझ्नैपर्ने महत्वपूर्ण कुरा प्रेम सेवा हो, यसले केवल सेवाभाव राख्दछ । त्यसैले प्रेममा झर्को हुँदैन । प्रेमलाई छोड्नै सकिँदैन ।
विचार, चेतना क्षेत्रको एउटा महत्वपूर्ण सम्पदा हो प्रेम । हामीलाई हरेक कार्य गर्न, योजना बनाउन र ती योजना पूरा गर्न प्रेमले प्रेरित गर्छ । मानवले जीवनको उपयोग गर्छ त प्रेमको लागि गर्छ ।
आजभोली मायामा धोका पनि धेरै हुन्छ| ज्योतिषशास्त्रको अनुसार ती राशिका मानिसहरु अरुको दिल तोड्न माहिर हुन्छन्।
मेष राशि भएका व्यक्तिहरु अरुप्रति छिटै आकर्षित हुन्छन्। यिनीहरू प्रेमको मामलामा त्यति गम्भीर हुँदैनन् | यिनीहरु अरुप्रति जति छिटै आकर्षित हुन्छन् त्यति नै छिटो मनबाट आकर्षण हट्छ । प्रेमको मामलामा पनि छिटै मनबाट प्रेमको भावना हट्छ| यिनीहरु कसैले उक्साएको भरमा अथवा आफ्नो पक्षमा केहि कुरा भएन भने आफ्नो प्रेमीलाई धोका दिन पनि पछि हट्दैनन्|
मिथुन राशिका व्यक्तिहरू उनीहरूको दोहोरो व्यक्तित्वका लागि चिनिन्छन् र उनीहरूको यहि स्वभावले उनीहरूको सम्बन्धमा पनि असर पार्छ। कहिलेकाँही यिनीहरू आफ्नो प्रेमीको बारेमा धेरै संवेदनशील हुन्छन्, तर कहिलेकाँही उनीहरुको अनुहार पनि हेर्न मन पराउँदैनन्। यिनीहरू यो महसुस गर्दैनन् कि यस्तो व्यवहारले आफ्नो प्रेमीको मन तोडिन्छ।
तुला राशिका व्यक्तिहरू सन्तुलित जीवन बिताउँछन्, जब उनीहरूलाई केहि गलत छ जस्तो लग्यो भने यसलाई स्थिर पार्ने उपायहरू खोज्छन्। यस्तै भवनको मामलामा पनि आफ्नो खुशीको लागि आफ्नो प्रेमीको भावनासँग खेलभाड गर्न पनि पछि सर्दैनन्।
यस राशिका व्यक्तिहरूको लागि आफ्नो करियर सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। यस्तोमा उनीहरूको लागि करियर वा जागिर आफ्नो प्रेमी भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहि कारण उनिहरु आफ्ना प्रेमीलाई धोका पनि दिन सक्छन्।
यस राशिका व्यक्तिहरूले परिस्थिति अनुसार प्रेमीको दिल तोडछन्। यस राशिका मानिसहरू यदि कुनै कुरा उनीहरूको पक्षमा हुँदैन वा उनीहरूको अनुसार हुँदैन भने, तब यी व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रेमीलाई छोड्न पनि समय लिदैनन्।